Kedụ ka akpịrị obi ji ama atụ dị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Sadulu akpịrị igwe kwụ otu ebe - olee otu ị ga-esi dozie
Kedụ ka akpịrị obi ji ama atụ dị?
Agbanyeghị, nkọwa zuru ezu ga-abụ aakpịrị, na-etolitekarị akpụkpọ anụ na mpaghara nke na-eme ka ịkpọtụrụ ya mgbe niilesadulu. Fọdụsadulu ọnya anyaotutudị kantụpọ na ndị a na-ebutekarị ntutu isi nje.Akpịrịnalee anyaỌzọdị kaotuto na-abụkarị nnukwu ma nwee ike na-egbu mgbu.
Onye dị obi umeala, kpọọ ya ihe ị chọrọ: bum, ass, bum or bum. Ọ bụ otu n’ime isi ihe atọ dị na kọntaktị gị na igwe kwụ otu ebe gị na nke kachasị mkpa. Ala nwere ọnya bụ ala dị mwute.
Ọjọrọ njọ. Yabụ ebe a bụ ndụmọdụ iri kachasị dị na GCN iji zere ibute ọnya. Ka anyị chee ya ihu, nọdụ ala ma ọ bụ dinara ala rie ụfọdụ nri gị kachasị amasị gị, ịgagharị isiokwu katalọgụ GCN na-abụkarị nhọrọ a họọrọ, ọkachasị mgbe ị na-arụsi ọrụ ike ụbọchị na sadulu ọbụlagodi na ihu igwe dị egwu.
Nye ịnyịnya ibu gị oge ụfọdụ. Ha ga-ahụkwu gị n'anya ma lekọta gị mgbe ị kacha dịrị ha mkpa. Ọ bụrụ n’ịche maka ya, a na-akpọ nịịgba dị mkpụmkpụ nke ahụ nihi na ha dị mkpụmkpụ ma bụrụ maka ịgba ígwè.
Ndị na-edo onwe ha enweghị nchebe na-adị n'etiti sadulu na n'elu ya ma ọ bụghị nke ihe ọ bụla, ma ọ bụ owu ma ọ bụ silk, nke a ga-agba ịnyịnya. Mgbe ị na-eyi n'etiti gị na nịịka gị, ọ na-akọ ma na-ete, na-ahapụ gị na ihe mgbu na-afụ ụfụ ruo ụbọchị, yabụ nwee obi ike na ihe ndị dị na ịdọrọ onwe gị ọtọ n'okpuru uwe gị. Gba ọsọ na-agba ịnyịnya siri ike maka ihe kpatara ya, ihe kpatara ya bụ na ị naghị enweta ọkụ ọkụ na mpaghara kachasị emetụ gị n'ahụ.
Ya mere, gbaa mbọ hụ na ị ga-enweta obere uwe mwụda nwere uru dị ukwuu. O siri ike, ha gwuo na mpaghara ụfọdụ ha ekwesịghị igwu, ma ha adịghị ọcha, ha na-agbagharị na ngwa ngwa ọdịda gị dị ka ọbọgwụ na ọdọ mmiri oyi kpọnwụrụ na ọdọ mmiri mara mma nke na-adịghị mma. a epic scale.- Ọ bụrụ na ịchọghị ka patootie gị dị ka ihu ọnwa, hichaa obere uwe gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ike ịdaba na ọnya sadulu yana akpụkpọ gị ga-enwe ọsụsọ, unyi, na chi maara ihe ọzọ maka izu, ọ gaghị enyere aka. Ọ ga-eme maka a bumpy na iru ala ride na site bumpy anyị pụtara scabby - lemon ọhụrụ! - jiri ude chamois, dị jụụ n'ihi na ụbọchị gara aga, ejiri ya iji kpuchido okpu sitere na chamois siri ike nke batara dịka obere ntinye ụbọchị. Ọfọn, a na-ejikwa ude chamois taa dị ka ụdị ude ndị na-ete metụ okenye, ihe enyemaka na-eme ka ahụ ghara esemokwu.
lactate ntinye uzo
Naanị jide n'aka na ị naghị eji balm na-ekpo ọkụ ma ọ bụ mmachi. Otu n’ime ụzọ kachasị mma iji gbochie ọgọdọ mgbu bụ izere ngwere mmiri. Nke a bụ ebe mudguards nwere ike inyere aka.
Idebe onwe gị na igwe kwụ otu ebe gị pụọ na apịtị na mmiri n'okporo ámá nwekwara ike inyere aka izere 'M ga-eyiri ihe mberede na-adịghị mma' nke na-emekarị mgbe ị na-ahọrọ ihe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na nha nke sadulu na ahịa nke dị mma n'ihi na enweghị ụdị a kapịrị ọnụ nke ga-adabara ụdị onye ọ bụla na-agba ịnyịnya. Yabụ ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ maka nkasi obi mgbe ị na-apụ apụ, gbalịa ịnyịnya ole na ole dị iche iche wee hụ ma ị nwere ike ịchọta nke ziri ezi maka gị.
Naanị cheta, ọ bụrụ na ị na-achọ oche ọhụụ, ọ pụtaghị na ọ dị mma. Dị ka nke ọma dịka ịnọdụ ala ntụtụ dabara gị, ọ nwere ike ime gị nke ọma. Eleghị anya ọ bụghị ihe mbụ ị ga - eche mgbe ị na - eche nkasi obi, mana ka anyị na - etinyekwu ike na pedals, a na - etinyekwu ibu na ụkwụ, obere na buttocks.- Site na mbido enwere maka onye ọ bụla nwere obere ma ọ bụ enweghị ndidi mgbe ọ na-abịa okomoko na azụ, a di na nwunye nke nhọrọ maka ekpe ubi na m na-aga na-egosi ugbu a.
Nhọrọ nke mbụ bụ na ị nwere ohiri isi zuru oke ma kee ya na bọtịnụ onye gị ma ọ bụ ọbụlagodi nke gị iji usoro ọ bụla ị nwere. Nke ahụ kwesịrị ịbụ ọgwụgwọ. - Ọ dị mma, m ga-ekwu Matt, enweelarị m obi iru ala na mpaghara mgbu mgbu, kedụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ? - Ọfọn, nhọrọ abụọ dị obere.
Basically ga - enweta ohiri isi yiri nke a ma ọ bụrụ na inwere otu aka, ihe ị na - eme bụ ịwụnye ya nịịka gị. Ọ na-amasị m nke ahụ, dị mma. Amaghị m ihe kpatara na ndị mmadụ echebughị ya maka mbụ, Dan.
Ọ bụ ezie na - Njikere? - Ee, ka anyị gawa! Mgbe ọ ruru ya, e nwere n'ezie ọ dịghị ụzọ na-eme ka gị na-agba ịnyịnya kpamkpam ala.
Ọ bụ naanị ihe gbasara omume.- Ee, mana awa ole na ole ị nọrọ na sadulu kwa ụbọchị, ruo ọtụtụ afọ, n'oge ụfọdụ, ị ga-eji osisi ị na-akwọ ụgbọ mmiri na-ata ahụhụ ị na-atachi obi kwa ụbọchị ma ị na-echeghachi ma na-eche ihe kpatara ya gara na mkpali niile. Maka ntuziaka maka ịtọ ntọala gị dị elu, pịa isiokwu anyị dị n'elu - ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta etu esi edozi sadulu gị, pịa n'okpuru - ma ọ bụrụ na ịdenyeghị aha GCN, ọ bụ n'efu ma na ị ga - pịa anyị.
Ọ dị mma, ọkara ọkara a wee weda m ala. - Oh, echere m na m nwere ike ịchọ - Enwere m ike itinye ohiri isi m? - ịhịa aka n'ahụ.
vegan ala ọbara mgbali
You nwere ike ịkwụsị igwe kwụ otu ebe ahụ, Dan? - you nwere ike inyeghachi m eriri ọzọ? - Eeh.
Kedu ka ị si agwọ ọnya ịnyịnya ibu?
“Ọ bụrụ na ị nweta asadulu akpịrị,emesoọ dị ka ọrịa akpụkpọ anụ obodo ma ọ bụ ntụpọ, jiri ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ude antiseptik. Ice nwekwara ike ịba uru iji nyere aka belata ọzịza ọ bụla.Eprel 10 2014
Gịnị bụ ọnyá obi na-adị n'elu ịnyịnya ígwè?
Sadulu ọnyagụnyere ọtụtụ ọnọdụ akpụkpọ ahụ hụrụ na pelvic / genital region nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè. Ha na - eme n'ihi mmiri, nrụgide na esemokwu ebe ndị egwuregwu na-anọdụ naigwe kwụ otu ebeoche (sadulu).
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka ọnya sadulu iji gwọọ?
Ọ bụrụ n ’ijide ha n’oge, ọ kachasịpụọmgbe ụbọchị ole na ole kwụsịrị igwe kwụ otu ebe, ma miriọnyanwere ikenaraizu ole na ole, ọ na-ekwu. Gaa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ha na-alaghachi ugboro ugboro; ikpeazụ karịa izu abụọ; ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu na-abawanye nke ukwuu, ahụ ọkụ na uhie uhie na saịtị ahụ.Jul 17. 2018 Nov.
Gini mere ọkpụkpụ m ji anọdụ ala na-afụ ụfụ mgbe anyị na-agba ịnyịnya?
Adabaghị adaba nanke giigwe kwụ otu ebe nwere ike ịbụ isi ihe kpatara yanke ginkasi obi sadulu. Ọ bụrụnke gisadulubudị oke elu, dị ala karịa, gafere oke, larịị, ọ bụghị ọkwa, maọbụ ọ bụrụ na ịdịiru oke tere akanke ginjikwa, ị nwere ike na-enwemgbun'ihi ya.
Gini mere ọnya ji aru m mgbe m gachara ọgba tum tum?
Ọ bụ nkịtị gịisiinwe mmetụta ntakịrịakpịrị mgbea na-agba ịnyịnya, n'ihi na mgbe ị na-anọdụ na aigwe kwụ otu ebeOche, ọtụtụ n’ime ibu gị na-ekesa na okpukpu abụọ pere mpe na obere pelvis gị. Nke ahụ nwere ike idugaakpịrị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ ogologo njem, ka Maddy Ciccone, onye nkuzi SoulCycle na Boston na-akọwa.Ọnwa Ise 14, 2018
Ngwa ịnyịnya ibu sara mbara karịa nke ọma?
Ihe mgbochi sara mbarana-adịahụ iru alaya mere dị mma maka ịgba ịnyịnya ogologo ma ọ bụ ndị na-atụrụ ndụ oge ebe ịdị arọ dị site naỌzọihe abughi nsogbu. Ikwesiri ịkpachara anya, ma ọ bụrụ nasaduludị oke obosara ọ nwere ike ịnwe chafe ma oke oke nwere ike itinye nrụgide dị ukwuu na akụkụ ndị dị nro.Jul 29. 2015
Kedu ka ị ga-esi kwụsị ihe mgbu sadulu?
Banyere ihe ị nwere ike ịnwale n'ụlọ: ịkụnye imi gịsadulugbadata site n’ọkwa ma ọ bụ abụọ (ihe karịrị nke ahụ) nwere ike inye aka belata nrụgide; na ịnya si nasaduluọ bụla 10 nkeji ma ọ bụ otú nwekwara ike inye aka belata mgbali najigideọbara na-asọ.Ọnwa Ise 26, 2016
Kedu ka m ga-esi mara ma ihe m ji anọ n’elu dị warara?
Ọ bụrụakụkụ nke isi bụwarara warawara, ihe ndị ahụ ga-egwu n'ime akwara ịnyịnya ma yikarịrị, n'etitisaduluagaghị abata na kọntaktị na ịnyịnya gị.Ọ bụrụisi bụỌzọkwaobosara, nasaduluga-anọdụ ala n'ihu, na-etinye nrụgide n'elu nkụ ma ọ bụ azụ azụ.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na sadulu gị sara mbara?
Mgbe olekasadulu sara mbara nke ukwuun'imeihen'ihu, ọ nwere ike ịdakpuihekpọnwụọ. Nke a na-ewesaduluenweghị itule site n'imeihepommel dị ala karịaihecantle, nke n'aka nke na-eburu nsogbu ọzọihen'ihuiheosisi (naiheakpọnwụ / ubu) karịa asaduluya na osisi kwesiri nke oma.Bọchị 8 2016
Etu esi emeso ọnya sadulu na igwe kwụ otu ebe?
Olee otú Iji: Na-emeso Saddle Sores 1 SADDLE & amp; UWAAKA. : Ọ dịghị mma inwe otu na-enweghị nke ọzọ. 2 GCỌ DISTANCES N’EKWE. : Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n’ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ na ị na-achọ ịbanye n’ime oche ọhụrụ, 3 CHAMOIS CREAM. : Ọ bụla na-agba ígwè ezigbo enyi bụ ezigbo ude chamois. 4 SHOW. : Tupu na mgbe ịgba ịnyịnya, sachaa onwe gị na ịsa ahụ.
Akpịrị ihe ndozi nwere ike ịbụ mmetụta dị n'akụkụ?
Akpịrị ọnya nwere ike ịbụ ihe mkpasu iwe na-ewe ogologo oge ejiri igwe kwụ otu ebe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-eji otu n'ime ụzọ ịnyịnya igwe kachasị mma, ọ nwere ike ịdị iche site na obere iru ala na-achọ iwepụ ịwa ahụ. Ha na-abịa n'ọtụtụ ọdịiche dị iche iche, ma na-emetụta ụfọdụ ndị karịa ndị ọzọ.
Kedu ihe na-akpata ọnya na azụ nke sadulu?
A ụfọdụ ọnya na ọbụna-acha ọbara ọbara na mbufụt bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ogologo ụbọchị na sadulu ma ihe mgbu dị egwu nke na-emetụta ike gị ịnyagharị kwesịrị ime ihe ozugbo. Ebube a na-ahụ maka sadulu bụ akpa ntutu ntutu na-efe efe, nke a maara dị ka folliculitis ma ọ bụ otuto, nke a maara dị ka furuncle.